Mareykanka oo diyaaradaha drones geynaya dalal Soomaaliya ka mid tahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo diyaaradaha drones geynaya dalal Soomaaliya ka mid tahay
A warsame 18 February 2015 18 February 2015
Mareeg.com: Markii ugu horreysay dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay dalal saaxiib dhow la ah ay ka iibin doonto diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Drones-ka, sidaas waxaa qoray wargeyska Mareykanka ah ee The Washington Post.
Sida wararku sheegayaan, labo sababood ayaa ku kalilay Mareykanka iibinta diyaaradahaas oo markii hore aan suuqyada ooli jirin.
Sababta koowaad ayaa lahu sheegay iney tahay sidii loo wiiqi lahaa kooxaha Al-Qaacida, ISIS ee ka dagaalama Suuriya, Ciraaq, Liibiya, iyo Masar iyo Al-shabab oo ka dagaalanta dalka Soomaaliya, marmarna u gudubta Kenya.
Sidoo kale, waxaa Mareykanku doonayaa in lagula dagaalamo kooxda Boko Haram ee Nigeria iyo Jabhadda Alnusra ee dalka Suuriya.
Sababta labaad ee Mareykanka u iibinayo drones-ka ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii aan suuqa ganacsiga looga awood roonaan laheyn, kaddib markii dalka Shiinuhu uu billaabay inay iibinta diyaaradaha Drones-ka ee ay soo saaraan.
Mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socon doono dalalka uu ka iibinayo diyaaradahan Drones-ka si aan loogu adeegsan wax dhaawacaya sharciga caalamiga ah ee dhanka bani’aadamnimada.
Saraakiil ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in Drones-ka uu iibinayo Mareykanka loo adeegsan doono kooxaha ka dagaalama dalalka Somalia, Suuriya, Ciraaq, Afgaanistaan, Yemen iyo Liibiya, sidoo kalena ay qayb ka noqdaan ugaarsiga hoggaamiyeyaasha kooxaha Islaamiga ah ee Caalamka.
Mareykanka ayaa horay uga iibiyay diyaarada Drones-ka dalalka Britain iyo Talyaaniga; iyadoo dowladahaas ay u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha ay ugu yeeraan argagaxisada ee caalamka ka jira.
Taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya, Jen. C/araxmaan Tuuryare ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in dalka Soomaaliya la keeni doono diyaaradaha is-wada duuliye la’aan, islamarkaana dagaalama ee drones-ka loo yaqaano.
Lama oga in drones-ka la geynayo Soomaaliya loo gacan gelin doono ciidamada Soomaaliya iyo iney adeegsan doonaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ama ay adeegsan doonaan ciidamo ka socda dalal kale.
Muqdisho: Isgoyso muhiim ah oo saaka howlgal laga sameeyey